ဘာကြောင့် ၂၀၁၅ မှာဗွီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာကိုအကောင်အထည်ဖော်သင့်သလဲ Martech Zone
သောကြာနေ့, မတ်လ 20, 2015 သောကြာနေ့, မတ်လ 20, 2015 Douglas Karr
ကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းမှာလုပ်နေတဲ့အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုတိုင်းကိုဗွီဒီယိုများကလုပ်ပေးနေသည်။ တွစ်တာတွင်တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုဖိုင်များလွှင့်တင်ခြင်းမှသည် erkရာဝတီFacebook နှင့် Instagram တို့တွင်လူကြိုက်များမှုနှင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်တိုင်းတွင်မြင့်မားသောအဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ထားသောဗီဒီယိုများရရှိနိုင်မှုတို့ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့၊ ဗီဒီယိုအသွားအလာအားလုံး၏ထက်ဝက်ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်သို့ပို့လိုက်တယ်၊ ဒါကမယုံနိုင်လောက်အောင်ကြီးထွားမှုပဲ။
ထို့အပြင်ဗွီဒီယိုများသည်လူကြိုက်များခြင်းသို့မဟုတ်စားသုံးသူများကမောင်းနှင်ခြင်းမျှသာမဟုတ်ပါ။ 80% ကျော် အကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိများကဗီဒီယိုပိုကြည့်သည် သူတို့တစ်တွေလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်နှင့်သုံးပုံသုံးပုံထက် အမှုဆောင်အရာရှိများသည်အလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သောဗီဒီယိုများကြည့်နေကြသည် အပတ်တိုင်း! ထိုရွေးချယ်မှုပေးထားသောအမှုဆောင်အရာရှိများ၏ 59% မဟုတ်ဘဲဗီဒီယိုတစ်ခုကြည့်လိမ့်မယ် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပါ။ ဒါကြောင့်သင်က B2C ဒါမှမဟုတ် B2B ကုမ္ပဏီပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။
ဗွီဒီယိုများရှိခြင်းသည်ပွင့်လင်းမှုနှုန်းကိုတိုးစေသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေသူများကအမှတ်တံဆိပ်အသိပညာ၊ ဦး ဆောင်မှုမျိုးဆက်နှင့်အွန်လိုင်းထိတွေ့မှုတို့အတွက်ဗွီဒီယိုများကိုထိရောက်စွာတွေ့နိုင်သည်။ ဗွီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်အလွန်လူကြိုက်များလာပြီး HighQ ကဖော်ပြပြီးဖြစ်သည် 2015 ဗီဒီယိုစျေးကွက်၏နှစ်!
အမြင့် ထုတ်ဝြေခင်း၊ သတင်းအချက်အလက်နေရာနှင့်လုပ်ငန်းအတွက်လုံ့လဝီရိယရှိသောဖြေရှင်းနည်းများပေးသည်။
Bing - နှင့်သူတို့ကိုမည်သို့ရှောင်ရှားရန်အကုန်အကျအများဆုံးရှာဖွေမှုသတ်မှတ်ချက်များ
7:2014 pm မှာနိုဝင်ဘာ 11, 38
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သတင်းအချက်အလက်ဂရပ်ဖစ်ကဗီဒီယိုစျေးကွက်၏ထိရောက်မှုကိုနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီအချက်အလက်ဂရပ်ဖစ်ကိုအသိပေးခြင်းအားဖြင့်ဗီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကစီးပွားရေးအတွက်ဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်၊ ဘာကြောင့်ဗွီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည်တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့တိုးများလာနေသည်ကိုလူတိုင်းနားလည်လိမ့်မယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီလှပတဲ့အင်ဖိုဂရပ်ဖစ်ကိုတင်ပြတဲ့အတွက်ဒေါက်ဂလပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒီလိုအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့အချက်အလက်ဂရပ်ဖစ်မျိုးကိုမကြာခဏမြင်ရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် :)
သူ Mike Martinez
ဒီဇင်ဘာ 18, 2014 မှာ 9: 44 AM
သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကို info ဂရပ်ဖစ်တွေနဲ့မျှဝေဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း။
မတ်လ 22, 2015 မှာ 4: 21 pm တွင်
ကျွန်ုပ်စာဖတ်သူများအတွက်ဗွီဒီယိုများယူဆောင်လာရန်လည်းစီစဉ်နေပါတယ်။ ငါရလဒ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးရှုပ်ထွေးခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူသိတယ်။ ငါကြိုးစားရန်ရှိသည်! ဒီ infographics တော်တော်လေးထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။